पहिलो कोभिड संक्रमित अस्पताल भर्ना भएको एक वर्ष, डा बास्तोला भन्छन् - स्वास्थ्य प्रणालीको यथार्थ चित्र छर्लङ्ग भयो :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
पहिलो कोभिड संक्रमित अस्पताल भर्ना भएको एक वर्ष, डा बास्तोला भन्छन् - स्वास्थ्य प्रणालीको यथार्थ चित्र छर्लङ्ग भयो कुनै दिन थकान नभनी सेवामा जुटिरहने टिमको ऊर्जा घटेको छैन
स्वास्थ्यखबर बुधबार, पुस २९, २०७७, १८:४४:००
काठमाडौं- नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित उपचारका लागि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भएको एक वर्ष पुगेको छ।
अस्पताल भर्ना भएका ती संक्रमितको नमुना परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो। पुस २९ गते अस्पताल भर्ना भएका उनको रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभको रिपोर्ट माघ ९ गते आएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको भोलिपल्ट माघ १० गते नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित फेला परेको सार्वजनिक गरेको थियो।
पहिलो संक्रमित उपचारपछि संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज भइसकेपछि मात्र उनी पोजिटिभ भएको जानकारी बाहिर ल्याइएको थियो।
पहिलो संक्रमित अस्पताल भर्ना भएको एक वर्ष पुगेको भन्दै अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा कोभिड संयोजक डा अनुप बास्तोलाले एक वर्षको अवधिमा भोगेका अनुभव छोटकरीमा सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले यो एक वर्षको अवधिमा नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको अथार्थ चित्र छर्लङ्ग भएको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तो छ डा बास्तोलाको अनुभव
टेकु अस्पतालमा अझ भनौं नेपालमै कोरोना भाइरस संक्रमित पहिलो संक्रमित भर्ना भएको आज एक वर्ष पुग्यो। कोभिड-१९ महामारीमा यो एक वर्ष थकान, तनाव, डर नभनी खट्ने मेरा सबै सहकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी एवं सहयोगीलाई नमन गर्न चाहन्छु।
कोभिडबाट जीवन गुमाउनु भएका आमा-बुबा, दिदी-बहिनी-दाजु-भाइमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु। हरसम्भव कोसिस गर्दा पनि बचाउन नसकेका बिरामीका आफन्तको वियोग र निको भएर घर फर्किनेहरुको मुस्कानको बीचमै यो एक साल बित्यो।
सुरुवाती दिनहरुमा नेपालमा कोभिड भित्रिँदै गर्दा स्वास्थकर्मीमा त्रास र अस्पतालहरुमा भ्रम थियो! संक्रमितहरु टेकुमा मात्र जान्छन् ! फलस्वरुप कोभिड महामारी आउनुपूर्व नै अन्य बिरामीका लागि अस्पतालका ढोकाहरु बन्द भए। कसैलाई कोरोना पोजेटिभ देखिए अस्पताल नै सिल हुन्थे। त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै दिन थकान नभनी बिरामीको सेवामा जुटिरहने टिमको ऊर्जा आजसम्म घटेको छैन।
पछिल्ला दिन संक्रमण दर उच्च भएको बेला अस्पतालहरुले कोभिडका बिरामीलाई भकुण्डोजस्तो खेलाएको पनि देखियो, दुहुना गाईझैं दोहेको पनि देखियो। सँगसँगै नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको यथार्थ चित्र पनि छर्लङ्ग भयो। खासमा हाम्रो हैसियत उजागर भयो भनौं।
सरकारी अस्पतालले जागिर मात्र सोच्ने, जिम्मेवारी बिर्सिने अनि साधन-स्रोत भएता पनि, त्यसअनुसार बिरामीले सेवा नपाउने। त्यस्तै, निजी अस्पतालले नाफा मात्रै सोच्ने, जिम्मेवारी बिर्सिने, राज्य बाट छुट लिने, अनि राज्यले तोके अनुसार सेवा नदिने। यो यथार्थ देखियो, यसमा को बढी र को कम भन्ने मात्रै हो।
हाम्रो अवस्था यस्तै छ, त्यसैले कृपया लापरबाही नगरौं। आफू बचौं, अरुलाई पनि जोगाऊँ। अझै पनि हामी महामारीको भुमरीमै छौं। सबैतिर खुला छ। हामीले महामारीमा अपनाउनुपर्ने सबै मापदण्ड मिचिसक्यौं। अस्पतालमा बिरामीको चाप घटे पनि सिकिस्त बिरामी आउने क्रम जारी नै छ !